डरलाग्दा सपनाबाट कसरी छुटकारा पाउने ? – Health Post Nepal
डरलाग्दा सपनाबाट कसरी छुटकारा पाउने ?
२०७८ कार्तिक १५ गते १०:४४
सवाल: ३५ वर्षे महिला हुँ । म नियमितजसो डरलाग्दा सपना देख्छु । मेरा सपना उस्तैखालका हुन्छन् । यसले निद्रामा समेत असर पर्ने गरेको छ । राम्रो निद्रा नपरेजस्तो हुनाले दिनभर फ्रेस पनि हुन्न । यसको कारण र उपचार के होला ?
सपना मान्छेको जीवनको आधारभूत कुरा हो । जो मान्छेलाई राम्रो निद्रा लाग्छ, उसलाई सपनाको ख्यालै हुँदैन । वैज्ञानिक हिसाबले हेर्दा निद्रा चार चरणमा ग्रुज्रिन्छ । प्रत्येक चरण ९० मिनेटको चक्र हुन्छ । एक रातमा हामीले यस्ता चारदेखि ६ वटा चक्र पार गर्छौैं । जो गहिरो निद्रामा जान्छ, उसले सपना देख्छ, तर सम्झिँदैन ।
मस्तिष्कका क्रियाकलापको अध्ययन गर्दा निद्रामा सपना सबैका आउँछन् । जसको निद्रा खलबलिन्छ, उसले मात्र सपना सम्झिन्छ । त्यसैले यो कल्पनाबाहिरको कुरा हो । सपनाबाट मुक्ति पाउनका लागि निद्रा खलबल्याउने कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
सामान्यतः नियमित व्यायाम, सुत्नुअघि हलुका खाना, तनावको सकारात्मक व्यवस्थापन गहिरो निद्राका उपाय हुन् । अर्को मुख्य कुरा, सपनालाई परम्परागत ढंगले अथ्र्याउनुहुन्न ।
यदि पाँच वर्षमुनिका बालबालिका नियमितजसो सपना देख्ने, एक्कासि डराउने, आत्तिने, चिच्याउने गर्छन् भने यो ‘नाइट टेरर’ हो । यस्तो समयमा मनोचिकित्सकसँग परामर्श लिनुपर्छ । वयष्कका हकमा जीवनशैली व्यवस्थापन गर्दा पनि नियमित सपना देख्ने र निद्रा खलबलिने समस्या दोहोरिरह्यो भने, चिकित्सकसँग सल्लाह लिनु उचित हुन्छ ।
मनोचिकित्सक, त्रिवि शिक्षण अस्पताल